30-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray? | FooreNews
Home Barnaamijo 30-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray?
30-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray?
FoorenewsNov 30, 2015Barnaamijo, Sheekooyin, wararka0
W/T: Maxamed M. Yuusuf (Ilkacase)
30-kii November 1853-kii, maanta oo kale waxa dunida ka dhacay oo la xasuustaa guushuu Ruushku ka soo hooyey dagaalkii qadhaadhaa ee mudada dhex marayay dawladdii Cusmaaniyiinta, waana maalintii Cusmaaniyiinta lagu jebiyey dagaalkii Sinop ee dhinaca badda waana dagaalka loo yaqaano (Dagaalkii Qaram).
30-kii November 1854kii, maanta oo kale waa maalintii Xaakimkii wadanka Masar Maxamed Saciid Baasha uu ogolaanshaha u siiyey Ferdinand De lesbis oo Faransiis ah in uu dhiso kanaalka Suweys.
30-kii November 1919-kii, maanta oo kale waxa dunida lagu xasuustaa oo soo maray in wadanka Faransiiska haweenaydii ugu horraysay ku soo baxdo doorashooyinkii Golaha Shacabka (Baarlamanka). Waxaanay shacabka reer France maalintaasi codkooda siiyeen xildhibaano tiradoodu dhan tahay 123 xildhibaan waxaana markii ugu horraysay taariikhda dalkaasi Faransiiska ku soo baxday doorashada haweenay kali ah oo noqotay tii ugu horraysay ee loo doorto jagada Xildhibaanimo.
30-kii November 1939-kii, maanta oo kale waxa uu Midawga Soofiyeeti duullaan dhulka iyo badda ahba ku qaaday waddanka Finland oo maalmahaasi shaacisay in ay ka soo horjeeddo isbahaysiga Midawga Soofiyeeti hogaaminayo ee dagaalkii labaad ee dunida. Waxaanu Midawga Soofiyeeti u qaadan waayay in Finland oo ay jaar yihiin la safato isbahaysigii Maraykanku hogaamineyey ee reer Galbeedka waxaanu Ruushku dalka Finland ku qaaday weerarkii loo yaqaanay (Winter War) ama dagaalkii jiilaalka.
30-kii November 1942-kii maanta oo kale waxa dagaal faraha lagaga gubtay dhex maray laba markab dagaal oo ay kala leeyihiin dalalka Maraykanka iyo Japan waana maalmihii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida. Dagaalkaasi labada markab dagaal dhex maray waxa loo yaqaanay Tasavarunga War.
30-kii November 1962-kii maanta oo kale waxa qaramada Midoobay loo doortay Xoghaye cusub waxaana noqday diblomaasigii u dhashay wadanka Burma ee lagu magacaabi jiray Yu Thant.
30-kii November 1965-kii maanta oo kale waxa wadanka Kuwayt loo magacaabay Ra’iisal wasaare cusub oo dalkaasi hogaaminayay. Amiirkii waddanka Kuwayt ee wakhtigaasi Sheekh Sabaax Saalim Al Sabaax ayaa Sheekh Jaabir Axmed Al Sabaax u doortay Wasiirka Khaarajiga ee dalkaasi.
30-kii November 1970-kii, Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysaa waxa ay soo saartay qaraar nambarkiisu yahay 649 oo dhigaya in Shacabka reer Falastiin ay aayahooda ka tashan karaan. Kaasi oo xaq u siinayay shacabka reer Falastiin in ay dawlad dhistaan oo ay aayahooda ka tashadaan balse qaraarkaasi waxa hor joogsaday wadanka Yuhuudda oo aan Falastiin u ogolaan in ay ka dhabeeyaan xaqa ay u leeyihiin in ay noqdaa dal xor ah oo dawladnimo buuxda haysta.
30-kii November 1970-kii waa maalintii Yementa Koonfureed si rasmi ah ula baxday magaca Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ah ee Shacabka Yemen oo caasimaddeedu tahay Cadan, balse markii dambe la midawday Yementa Woqooyi oo caasimadeedu ahayd Sanca iyaga oo wada dhistay Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen oo caasimaddeedu tahay Sanca balse mar kale 1991 dagaal ka dhex qarxay.
30-kii November 1971 maanta oo kale, Ciidamado ay leeyihiin wadanka Iiraan ayaa gacanta ku dhigay oo qabsaday saddex jasiiradood oo ku yaalla Gacanka Khaliijka Carabta oo kala ah: Danb Al Kubraa, Danb Al Suqraa iyo Abuu Muusaa, kuwaasi oo ay Iiraan ku dooddo in ay iyadu leedahay halka ay dhinaca kale ka sheegtaan Imaaraadka Carabtu. Illaa maantana Jasiiradahaasi waxa haysta wadanka Iiraan waxaana muran ka dhaxeeyaa Imaaraadka Carabta oo isna ku doodaya in uu leeyahay oo khasab lagaga haysto.
30-kii November 1995 maanta oo kale waxa si rasmi ah u joogsaday weerarkii ama duulaankii isbahaysiga Maraykanku hogaaminayaa ku wadeen waddanka Ciraaq. Waa duulaankii loo yaqaanay Duufaanta Saxaraha. Maalintaasi ayuu duulaankaasi si rasmi ah u joogsaday iyada oo dalka Ciraaq laga saaray wadanka Kuwayt oo ay khasab ku qabsatay.
30-ka November sannad walba waxa dunida laga sameeyaa dhawr ciidood oo laga xusaa. Waxaana ugu muhiimsan Xuska maalinta la dagaalanka daldalaadda ama fulinta xukunta dilka ah. La Soco Maalmo Kale
Previous PostHogaanka Xisbiga KULMIYE Oo La Sheegay In Ay Qorshaynayaan Qaabkii Ay Tallaabo Adag Uga Qaadi Lahaayeen Waabeeye Iyo Talyanle Next PostMuxuu Xildhibaan Buubaa Ka Yidhi Khilaafka Xisbiga UCID Kala Irdheeyey Iyo Khilaaf La Sheegay In Uu Ka Dhaxeeyo Isaga Iyo Cirro